January 25, 2021 – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on January 25, 2021 Author admin	Comments Off on သူဌေးရဲ့ဒုတိယမယား
မိုးကလေးက တစိမ့်စိမ့် အေးနေသည်။ ထိုတစိမ့်စိမ့်ရွာနေသော မိုးရေထဲတွင် အိုးကြိုက်မောင်တစ်ယောက် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်ရင်း
Posted on January 25, 2021 Author admin	Comments Off on ဇယားမလေး
ကျမနာမည် အင်ကြင်းမိုး မိုး လို့ပဲအတိုခေါက်ခေါ်ကြတယ်။ သထုံဈေးမှာ အထည်ဆိုင်ဖွင့်တယ်။ အသက်က နှစ်ဆယ့်လေး ထဲမှာပေါ့.. အိမ်ထောင်ကျတာ သုံး နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ယောက်ကျားက ကိုထူးမော်တဲ့။ ဆက်မပြောခင် ကျမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်း အကြမ်းဖျဉ်းပြောပြမယ်။ ကျမက အသားအရမ်းမဖြူပေမဲ့ ဝင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်။ ခြေသလုံးတွေ ပေါင်တန်တွေနဲ့ တခြားအတွင်းသားတွေက တရုတ်မတွေလို မဖြူပေမဲ့ဝင်းဝါပြီး ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်။ နောက် ကျမရဲ့နို့လေးတွေက အိမ်ထောင်မကျခင်က အတော်ပြားပြီးသေးတဲ့အထဲမှာပါပေမဲ့နောက်ပိုင်း ကိုထူးမော်က လိုးကာနီးတိုင်း နို့တွေကို အသေညှစ်လွန်းတော့ အိမ်ထောင်သက် သုံး နှစ်အတွက် ဆူပြီးမို့လာလိုက်တာ အခုဆိုကိုထူးမော်ရဲ့ ယောက်ကျားလက်ဝါးနဲ့တောင် ပြည့်ချင်သလိုလိုဖြစ်နေပြီ။ ပြီးတော့ ကျမရဲ့ တင်ပါး၊ ဖင်ပေါ့ .. အရမ်းလှတဲ့အထဲမှာ မပါပေမဲ့ ခါးလေးကသေးပြီး ဗိုက်မထွက်တော့ ဖင်က နောက်ကိုကောက်ပြီးဝိုင်းနေတယ်။
Posted on January 25, 2021 Author admin	Comments Off on ကျမနဲ့အသစ်အဆန်း
နွယ်နီသည် အသက်နှစ်ဆယ့်ခြောက်နဲ့ တခုလပ်တယောက်ဖြစ်ကာ ငွေကြေးလည်းပြည့်စုံသူတဦးဖြစ်သည်။ ယောကျာ်းဆုံးသွားသည်မှာ သုံးနှစ်ခွဲခန့်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ကာမအရသာကို ချိုသည်၊ ခါးသည်သိနေရက်နဲ့ သူမ၏မပြည့်ဝသော ဆန္ဒများအတွက် ရတက်မအေးနိုင်အောင်ဖြစ်နေရလေသည်။
Posted on January 25, 2021 Author admin	Comments Off on သူမ၏မပြည့်ဝသော
မွန်မွန်တစ်ယောက် မိခင်ဖြစ်သူကစူလိုက်သဖြင့် စူပုတ်ပြီး အိမ်ပြင်ထွက်လာသည်။ အသက် ၁၈နှစ် အရွယ် မွန်မွန်ဟာ နမည်နဲ့လိုက်အောင် ဥစ္စာပေါရုပ်ချော လှမ်းလျှောက်တိုင်း ဘယ်ညာယိမ်းနေတဲ့ တင်ကြီးနှစ်လုံးနဲ့ နိုးနှစ်လုံးဟာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ဖွံဖြိုးလှသည်။ သမီးဘယ်သွားမလို့လဲ မျက်နာကစူပုတ်နေတာဘဲ ဘာလဲ သမီးအမေဆူလိုက်လို့လား… လာလာအဖေနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့…. အဖေဆိုလို့ အဖေရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး မွန်မွန် ၁နှစ်ခွဲအရွယ်မှာ မွန်မွန်အဖေဟာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြင့် ဆုံးသွားပြီးနှစ်လအကြာမှမိခင်ဖြစ်သူဟာ ကိုမျိုး ဆိုတဲ့လူနဲ့ပေါင်းသင်းခဲ့တာပါ.အသက်၃၀ အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ ကိုမျိုးဟာ အရပ်ရှည်ရှည်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်နှင့် အလွန်စိတ်ကြီးတက်သူပါ..မွန်မွန်က လည်း ငယ်ငယ်ထဲက ပထွေးလက်ပေါ်မှာကြီးလာတာဆိုတော့ပထွေးကိုဘဲ အမေထက်ပင်ချစ်ကြောက်ရိုသေ နေရသည်။ အခုလဲကြည့် ပထွေးရင်ခွင်ထဲဝင်ပြီး ဖက်ထားရှာလေသည်။
Posted on January 25, 2021 Author admin	Comments Off on မညှာမတာ
Posted on January 25, 2021 Author admin	Comments Off on အကိုကသေးသေးလေး
ခုတင်ပေါ်ဒူးလေးထောင်ထိုင်နေတဲ့သူမ ထမီလေးကိုအသာမတင်ပီးအမွေးရေးရေးနဲ့ခြေသလုံးလေးတေကိုပွတ်သပ်ဆုပ် နယ်ပီးအနမ်းလေးပေးလိုက်တယ်။ အပြင်ပန်း အသားညိုတယ်ထင်ရပေမဲ့ထမီဘဲအမြဲဝတ်တဲ့ ချစ်သူလေးရဲ့အတွင်းသားလေးကဝင်းမွတ်နေတာဘဲ့ ပေါင်သားလေးကိုအသာလေးလျာထိပ်နဲ့ပွတ်စွဲပေးပီး အတွင်းသားနုနုလေးကို စုတ်စွဲလိုက်တယ်။
Posted on January 25, 2021 Author admin	Comments Off on သူမဆီကအော်ညီးသံလေး
Posted on January 25, 2021 Author admin	Comments Off on အပျိုရိုင်းလေးလိုပင်
Posted on January 25, 2021 Author admin	Comments Off on လိုအပ်နေသောကွက်လပ်
စံပယ်ရှင်းသန့်ဆိုတဲ့သူမ… လှသည် ယဉ်သည်… အသက်၂၀ လှသွေးကြွယ်လေးတင်မက ဖွံ့ထွားသောရင် စွံ့ကားသောတင်တို့ကြောင့် ပုရိသတို့မျက်လုံးက သူမသွားရာကပ်ပါနေတာကို ခံရသလောက် မာနကြီးသူလေးလို့ နာမည်ကြီးသူလေးရယ်ပါ… အဲ့မာနရှင်လေးရဲ့ မာနတွေကိုရိုက်ချိုးပြီး သူမရဲ့အငုံစိတ်ထဲကကာမစိတ်တွေကို ဖော်ယူပြီး သူမကိုအရှက်ကုန်စေရုံမက လိင်ကျွန်သဖွယ် ဖာသည်သဖွယ် ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့သူက အမုန်းမဲ့ဂေါ်လီ ခေါ် နေမြတ်လင်းရယ်ပါ… ဒီနေ့လည်း နေမြတ်လင်းလာမည်ဆို၍ သူမမှာ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို သေချာစွာပြုလုပ်ထားရသည်…. မကြာမီပဲ တံခါးဘဲလ်မြည်သံကိုကြားလိုက်ရ၍ တံခါးသွားဖွင့်ပေးတော့ နေမြတ်လင်းတယောက်ဝင်လာသည်… သူမလည်း နေမြတ်လင်းရဲ့အနားတွင် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဖိနပ်ကြိုးကိုဖြည်ကာ ခြေအိတ်ပါချွတ်ပေးလိုက်သည်… ထို့နောက် နေမြတ်လင်းရဲ့ နောက်တွင်ရိုကျိုးစွာ ကပ်ပါလာခဲ့သည်…။
Posted on January 25, 2021 Author admin	Comments Off on အသဲခိုက်အောင်